अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुलाई कामको अनुमति 'पकेट मनी'को लागि हो, खर्च धान्न होइन - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुलाई कामको अनुमति ‘पकेट मनी’को लागि हो, खर्च धान्न होइन
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०५:०१ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा मूख्य कार्यालय रहेको कंडेल कन्सल्टेन्सी विगत १३ वर्ष देखि आफ्नो सेवामा निरन्तर लागिरहेको छ । यो कन्सल्टेन्सी मेलबर्नको पहिलो नेपाली कन्सल्टेन्सी हो ।
अष्ट्रेलियाप्रति नेपाली विद्यार्थीहरुको बढ्दो आकर्षण, अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुका समस्या, करियरको अवसर, पछिल्लो समय संचारमाध्यममा छाएका नेपाली विद्यार्थीसंग सम्बन्धित घटनाक्रम आदिको बारेमा हिमालयन कंगारुले कंडेल कन्सल्टेन्सीका निर्देशक राज कंडेलसंग कुराकानी गरेको थियो । आजको ‘करियर टक’मा उहाँसंग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउन चाहने विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सी छनोट कसरि गर्ने ?
सुरुमा विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सी छनोटमा नै ध्यान दिनुपर्छ । कसैले सुनेको भरमा, विज्ञापनको भरमा कन्सल्टेन्सीलाई विश्वास गर्नु हुँदैन । अहिले नेपालको जुनसुकै सहरमा पनि कन्सल्टेन्सीहरु भेटिन्छन् । ती मध्ये धेरै कन्सल्टेन्सीहरु युनिभर्सिटीसंग दर्ता भएका हुँदैनन् । जसले गर्दा तिनीहरुले विद्यार्थीलाई सही सूचना दिन सक्दैनन् । पछि केही समस्या भएमा त्यस्ता कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले युनिभर्सिटीसंग त्यो कन्सल्टेन्सी दर्ता भएको छ की छैन भन्ने बुझेर मात्र अगाडीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।
युनिभर्सिटी र विषयको छनोटको लागि विद्यार्थीहरुलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
सकेसम्म प्राइभेट कलेज छनोट गर्नु हुँदैन । शुल्कको लागि सहयोग गर्ने विभिन्न संस्था भएतापनि ती पर्याप्त नहुन सक्छन् । त्यसपछि कन्सल्टेन्सीको मात्र भरमा नपरी युनिभर्सिटी, कलेजको बारेमा आफूले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । इन्टरनेटमा पनि युनिभर्सिटीहरुको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । युनिभर्सिटी कहाँ छ, शुल्क कति लाग्छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा हुनुपर्छ । त्यस्तै, विषय छनोट गर्दा आफूले पढिरहेको विषय, आफ्नो लक्ष्य अनुसारको विषय हेर्नुपर्छ र त्यो विषयको लागि लाग्ने शुल्क, समय, पढाई हुने तरिकाको बारेमा बुझ्नुपर्छ । होइन भने, यहाँ आएपछि विषय परिवर्तन गर्ने झन्झट हुन्छ ।
विद्यार्थीहरु विषय परिवर्तन किन गर्छन् ?
यसमा विभिन्न कारण हुन्छन् । केही विद्यार्थीले त्यो विषयको लागि लाग्ने शुल्क महँगो भएका कारण, केही विद्यार्थीले उक्त विषयमा आफूले चाहे अनुसारको अवसर नदेखेका कारण, केही विद्यार्थीले पढाइ हुने शैली मन नपरेका कारण विषय परिवर्तन गर्ने गर्छन् । केही कन्सल्टेन्सीहरुले विषय परिवर्तन गरेमा, युनिभर्सिटी परिवर्तन गरेमा यस्ता अवसर छन् भनेर विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारिरहेका हुन्छन् । विद्यार्थीहरु त्यस्ता कन्सल्टेन्सीको पछाडी नलागी आफू अष्ट्रेलिया आउनुको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अष्ट्रेलियामा काम पाइएन, खर्च पुगेन भन्ने जस्ता गुनासा आउने गर्छन् । विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कामको लागि या डलर कमाउँछु भन्ने सोंचेर स्टुडेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया आउंदै नआउनुस् भन्छु म । विद्यार्थी भिसामा आउनुको अर्थ पढ्न आउनु हो । कमाउनको लागि आउनेहरु त वर्किङ्ग भिसामा आउँछन् । यहाँको सरकारले विद्यार्थीलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छ । यसको अर्थ विद्यार्थीले काम गरेर कमाउन् भन्ने होइन । यहाँको सरकारले विद्यार्थीले काम गरेर ‘पकेट मनि’ जुटाउन सकुन्, उनीहरु खुशी रहुन् भन्ने उद्देश्यले काम गर्ने अनुमति दिएको हो । यहाँको पढाइ खर्चको लागि त उसले पहिले नै सम्पत्ति, बैंक ब्यालेन्स देखाउन भनेको हुन्छ नि । यहाँको पढाइ खर्च उसले नेपालबाट नै जुटाउन सक्छ भन्ने भएपछि मात्र अष्ट्रेलियाले भिसा दिने हो । त्यसैले स्टुडेन्ट भिसामा यहाँ आएर काम पाईन, पैसा भएन भन्नु मूर्खता हुन्छ ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुको समग्र स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा अहिले अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले दु:ख पाएका छन्, अष्ट्रेलिया जानै नहुने देश रहेछ जस्तो छाप बनिरहेको छ । अष्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीहरु संघर्ष गर्न तयार भएर नै आउनुपर्छ । नेपालमा जस्तोसुकै काम गरेकोभएतापनि यहाँ ‘जिरो लेभल’ बाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आफूलाई पहिले नै मानसिक रुपमा तयार गर्नुपर्छ । त्यसरी कामलाई निरन्तरता दिंदै पढाइ सकेर यहाँको वर्क परमिट पाएका, यहाँ पढाइ सकाएर कामको अनुभव लिएपछि नेपाल फर्किनुभएका विद्यार्थीहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । स्टुडेन्ट भिसामा आएर, आफ्नो पढाइ सकेर अष्ट्रेलियाको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तित्वहरु पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थीले अष्ट्रेलियालाई कति बुझेर आएको हो, यहाँ आउनुको उसको मूख्य उद्देश्य के हो भन्ने कुराले समग्रमा उसको वर्तमान र भविष्य देखाएको हुन्छ ।
अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीहरुले नक्कली विवाह गरेर पनि आउँछन् नि !
नक्कली विवाह गरेर आउनु भनेको आफैले आफूलाई समस्याको दलदलमा लैजानु हो । त्यसैले नक्कली विवाह गरेर अष्ट्रेलिया आउंदै नआउनुस् ।
अष्ट्रेलियामा पढ्दै गर्दा विद्यार्थीहरु समस्यामा परेमा कसरि सहयोग लिन सक्छन् ?
सबैभन्दा पहिले त विद्यार्थीले यहाँका नियम कानुनहरुलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न यहाँ विभिन्न निकाय छन् । त्यस्तै, विश्वसनीय कन्सल्टेन्सीमा पुगेर सल्लाह लिनुपर्छ । साथीको लहैलहैमा या कसैले भनेको भरमा नभई आफूले बुझेर भरपर्दो कन्सल्टेन्सीमा जानुपर्छ ।
पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरुप्रति विद्यार्थीको वितृष्णा देखियो, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?
युनिभर्सिटीसंग दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरुले नेपालमा विद्यार्थीलाई जुन कुराहरु भनेका छन्, यहाँ आउँदा विद्यार्थीहरुले ती सबै कुरा पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीप्रति विद्यार्थीको वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक हो । तर सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई उही दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन र नेपालका कन्सल्टेन्सी र अष्ट्रेलियामा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु बीच तुलना गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा, विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन । कतिपय अवस्थामा स्वयम् विद्यार्थीहरुको पनि गल्ती हुन्छ । उनीहरु नेपालबाट प्रशस्त बैंक ब्यालेन्स देखाएर आउँछन् र काम पाइएन, पैसा भएन भन्ने गुनासो गर्छन् । त्यस्तै, कामलाई प्राथमिकता दिएर कैयौं महिनासम्म पनि कलेज जाँदैनन्, विषय फेरिरहन्छन् र पढाइ, भिसा आदि कुरामा समस्या आउन थाल्छन् ।
यी समस्याको समधानको उपाय के हुन सक्छ ?
विद्यार्थी सम्बन्धि आएका पछिल्ला घटनाक्रमले अष्ट्रेलियामा नेपाल तथा नेपालीबारे नराम्रो दृष्टिकोण सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको लागि विद्यार्थी भिसामा कडाइ हुने तथा अष्ट्रेलिया र नेपाल बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध नै बिग्रिने खतरा समेत हुन्छ । त्यसैले विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी तथा सबै सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु जरुरि छ । सबैभन्दा पहिले त नेपाल सरकारले शिक्षा नीतिलाई सुधार गर्दै कन्सल्टेन्सीहरुमाथि कडाई गर्नुपर्छ । धेरै समस्या निम्तिएको युनिभर्सिटीसंग डाइरेक्टली दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरुका कारण हो । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु बन्द गराएर युनिभर्सिटीसंग डाइरेक्टली दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई मात्र संचालन अनुमति दिनुपर्छ । अर्को कुरा, विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया आउनु अगाडी अष्ट्रेलियाको बारेमा राम्रोसंग बुझेर, यहाँ आउनुको आफ्नो उद्देश्य बारे स्पष्ट भएर, युनिभर्सिटी तथा कलेजको वातावारण तथा शुल्कको बारेमा जानकारी लिएर, यहाँको बसाइको लागि आफूलाई मानसिक रुपमा तयार गरेर मात्र आउनुपर्छ । र, अष्ट्रेलियामा रहेका कन्सल्टेन्सीले आफूलाई ठगेको पाएमा यहाँ उजुरी दिन सकिन्छ । यहाँको कानुनले ती कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गर्छ ।
Previousनिद्रा पुग्नेगरी नसुत्ने विद्यार्थीमा मानसिक समस्या
Nextमलद्धारविनाकी बालिकाको ग्रीनसिटी अस्पतालमा सफल शल्यक्रिया
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०४:१५
अष्ट्रेलियामा हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी निश्चल घिमिरेको शव फेला
१३ पुष २०७५, शुक्रबार १३:४०
वान डे विश्वकप छनौटमा खेल्ने नेपाली सपना : नेपाल र केन्या आमने सामने हुँदै
२८ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०१:२५